आफ्नै कामले चक्रव्यूहमा केपी सरकार ! – MySansar
आफ्नै कामले चक्रव्यूहमा केपी सरकार !
Posted on June 21, 2019 June 21, 2019 by राजेन्द्र मगर
आज असार ५ गते बिहिबार सत्ता पक्षकै नेताहरु सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको खबरलाई चर्चामा छ। पछिल्लो समय राजनीतिक वृतमा केही नयाँ परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।
गुठी विधेयककै कारण सरकार घडा टेक्न बाध्य भयो। सुचना प्रविधी विधेयकको कारण सरकारको व्यापक आलोचना जारी नै छ। सुचना प्रविधी विधेयकको बारेमा पत्रकारहरुले सरकार विरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारको विरोधको डोज बढ्न थालेपछि सरकार पक्षकै नेताबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्द जनताको ‘फ्रस्टेशन’ छताछुल्ल देख्न सकिन्छ। जनताले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षको नेताहरुले मन्त्रीहरुको आलोचना गरेका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल छन्।हिजो(बुधबार) माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयक विरुद्द जम्मा भएको भिडले पनि सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टीलाई सतहमा ल्याएको छ। यसले सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थप उर्जा मिलेको छ।
यसरी चौतर्फी सरकारको बिरोध सुनिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खराब ‘टाइमिङ सुरु भएको विष्लेषण हुन थालेको छ। एकातिर नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारमा हेरफेर हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ती दिदैँ हिडेका छन् भने अर्कोतीर पार्टीकै जिम्मेवार नेता माधव कुमार नेपाल तथा वामदेव गौतमले केपी सरकारको विरुद्द मोर्चाबन्दी गरेका छन्। पार्टीका दोस्रो तहका नेता घनश्याम भुसाल तथा योगेश भट्टराईको मोर्चा सरकारको विरोध गर्नमै सक्रिय छ।
एक महिनाअघि प्रचण्डले पत्रकार ऋषी धमलालाई अन्तर्वाता दिदैँ ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोप्य सहमती बिर्सनुहुन्छ भन्ने सोच्नपनि सक्दिन्’ भनेर अभिव्यक्ती दिएका थिए।
उनको आशय थियो, अब प्रम ओलीले सरकार छोड्ने बेला र आफु सत्तामा जाने पालो आयो।
प्रचण्डको अभिव्यक्तीले केही दिन राजनीतिक वृत तात्तियो। प्रचण्डको भनाइलाई आधार मान्दै अरु नेताहरुले पनि विभिन्न अभिव्यक्ती दिदैँ हिडे। दुई समहुका नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप सुनियो।घरको झगडाले छिमेकीलाई फाइदा भयो।
अहिले फेरि सरकार परिवर्तनको बहशले राजनीतिक क्षेत्र गर्माएको छ। यसको संकेत फेरि पनि प्रचण्डले नै दिएका छन्।
पोखरा पुगेर उनले भने,
‘मन्त्रिपरिषद् पुन:गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हो। तर पनि पार्टीको एक अध्यक्षको हैसियतले यस विषयमा हामी दुईबीच छलफल भइरहेको छ। फेरि पनि म फर्किएपछि यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ। आज भोलि नै हुन्छ भन्ने होइन प्रधानमन्त्रीले जहिले चाहनुभयो त्यहिले नै हुन्छ। तर, पनि बजेट आइसकेपछि केही हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
त्यस्तै नेकपा नेता झलनाथ खनालले पनि सार्वजानिक कार्यक्रममै सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्।
उनले गत साता गुठी विधेयकमा व्यापक विरोध सुनिएपछि भनेका थिए,
‘सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा पार्टीको उच्चस्तरमा छलफल भएको हुनुपर्छ, नीति निर्णय भएको हुनुपर्छ, समझदारी निर्माण भएपछि मात्र विधेयक आउनुपर्छ। यो आमनियम हो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। पार्टीको नेतृत्व तहमा कुनै विचार–विमर्श पनि छैन। हामीले पनि विधेयक आइसकेपछि संसदबाट थाह पाउने हो। कति विधेयकमा त्रुटी छ, कतिमा के छ भन्ने कुरा पब्लिकको टिप्पणी शुरु भएपछि बल्ल थाह पाइन्छ।’
यसरी सत्तापक्षकै नेताहरुले सरकारकव विरोध गरिरहँदा नेकपा फुट्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ती आउन थालेका छन्। नेकपाबाटै दुर्घटना निम्तिने विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले गुठी विधेयकको पराकम्पन बाँकी रहेकाले नेकपा फुट्न सक्ने तर्क गरेका छन्।
उनको तर्कको सार छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रम, सत्तापक्षकै नेताहरुको अभिव्यक्ती र सरकार विरुद्द जनताको आक्रोश हेर्दा राजनीतिक वृतमा केही खिचडी पाक्दै गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। पत्रकार सुधिर शर्माले पनि प्रम ओली एक्लिन थालेको लेखेका छन्। उनले प्रम ओली घेरिन थालको फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्।
उनको स्टाटसको सार छ,
झट्ट हेर्दा शक्तिको चमक निकै देखिएपनि प्रायः शक्तिशालीले आफू एक्लिसकेको अनुभूति अन्त्यमा मात्र गर्न पाउने आम राजनीतिक नियती नै हो ।आफूले पाएको अभूतपूर्व अवसरको सदुपयोग गर्ने कि आफ्नै कारणले त्यसलाई गुमाउने ? लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओली यो दोसाँधछेउ पुग्दैछन् । निर्णय उनकै हातमा छ।
प्रम ओली पत्रकार, प्रतिपक्ष र जनताबाट त आलोचित छन् नै उनकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट घेरिदै गएका छन्। प्रचण्डले सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर अभिव्यक्ती दिइरहदाँ उनकै समकालिन नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम टाढिदैँ गएका छन्। उनको कार्यशैलीलाई लिएर योगेश भट्टराई तथा घनश्याम भुषालले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यी सबै समिकरण हेर्दा केपी सरकार आफ्नै कामले चक्रव्युमा फस्दै गएको भान हुन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमले यस्ता थुप्रै संकेत दिएका छन्।
1 thought on “आफ्नै कामले चक्रव्यूहमा केपी सरकार !”
चक्रब्यूहमाओली होईन हामि मतदाता फसेकोछ/ चक्रब्यूह काण्ड भयको महाभारतयुद्ध सत्ताको लालाचिहरुले के कस्तो सम्म गर्न सक्छ भनि बुझाउने कथा हो/ यो कथा नसुनेको कमै होला/ तर यो कथा सुनेको संख्या भन्दा सुनेर नबुझेकैको संख्या बढी भयको देखियो/
महाभारत युद्धमा सत्ता हत्याउन खोज्ने र सट्टा टिकाउन खोज्नेहरु भन्दा जो सहि हो तेस्को साथ् दिनुमा भन्दा नुन खायको बदलामा ज्यान दिने अन्धभक्तहरुकै हत्या धेरै भयको थियो त्यो पनि षड्यन्त्र पुर्वक; तेसमा मात्र दर्शक बन्न गयको नेपालको राजा यलम्बरको समेत कपट गरेरै हत्या हत्या गरियको थियो/ त्यो कथा अनुसार युद्धमा हार्ने पापी हुने जित्ने जिताउनेले आफुलाई बिना प्रतिबाद इश्वर जस्तै नमाने अधर्मि हुन्छ/ महाभारत कथामा सत्तामा रहेकालाई असफल बनाउन हराउन गर्ने कुरा केहि बाकीनै राखियको थियन/
ठिक तेस्तै त् भैरहेको छ नेपालमा परिबर्तनको नाममा भयको सट्टा-युद्धमा/ सत्तायुधमा नेताहरु कोहि मरेनन नेताको नुन खाने नखाने मात्रै मारियो थुनियो लुटियो/ फरक यति मात्रै छ कि नेपालमा हुँदै गरेको महाभारत जस्तैको सट्टा-युद्धमा जित्नेले मात्रै होईन हार्नेले समेत आफुलाई बिना प्रतिबाद प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक भयको नमाने जिउ धन उनीहरुको हुने सजाय पाउने अपराधि, सामन्ति अधिनायकबादी तानाशाही आदि ठान्छ/
त् सत्तायुद्धको चक्रब्युहमा ओली फसेको होलान नहोलान तर हामि मतदाताहरु पुराको पुरानै फसेको घेरियको छ र अब अभिमन्यु जस्तै मारिन मात्रै बाकि छ/मारिनै पर्ने सामन्ति भयको. लोकतन्त्रको बिरोधि भयको आदि आदि आरोप त् लगाईने सके/ अब सोच्नुस हामि मतदाता …हुने नेपालको महाभारत युद्धमा पाण्डव को कौरव को?